Ogaden News Agency (ONA) – Kormeerka Waftiga uu hogaaminayo Gudoomiyaha JWXO iyo Jaaliyada Denmark.
Kormeerka Waftiga uu hogaaminayo Gudoomiyaha JWXO iyo Jaaliyada Denmark.
Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeniya (JWXO) Adm. Mohd Cumar Cismaan iyo wafti balaadhan oo uu hogaaminayo yaa booqasho kumaraya wadamada qaarada Yurub. Wuxuu Gudoomiyuhu kulamo iyo shirar laqaadan doonaa shacabka Soomaalida Ogadeniya ee kudhaqan qaarada Yurub. Socdaalkan oo kamid ah booqashooyinkii caadiga ah ee madaxda iyo masuuliinta jabhadu lawadaagi jireen jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee kudhaqan dunida dacaladeeda yuu Gudoomiyuhu iyo waftigiisu lawadaagi doonaan muwaadiniinta Somalida Ogadenya ee kunool wadamada Yurub. Waftiga uu Gudoomiyuhu hogaaminayo waxay kormeer shaqo kusoomareen Jaaliyaadka kudhaqan wadamada kala ah Sweden, Germany iyo Finland. Taasoo sidiiran loogu soodhaweeyay wadamadii ay soobooqdeen mudadii ay kujireen socdaalkooda.
Hadaba waxaa la,ogaysiinayaa dhamaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka Somalida Ogadenya ee kudhaqan wadanka Denmark ineey kasoo qaybgalaan shir muhiim ah oo lagu qaban doono haduu eebuhu yiraahdo caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen 1/02/2014.
Waxaa kale oo shirkan lagu daawan doonaa filinkii Mudane Cabdullahi Xuseen, uu ogadenya kasoo duubay. Filinkan oo lagu soobandhigi doono xadgudubka baahsan ee shacabka Somalida Ogadenya uu kujiro. Waxaa hubaal ah in filinkan uu waxbadan oo qarsoonaa daah furi doono.
Ciiwaanka iyo goobta uu kulankan taariikhiga ah kadhici doono waxaad kaheli kartaan ogaysiiskan hoose ee hamoogaanina. Wixii faah faahin ah ee kusaabsan kulankan waxaad kala xidhiidhi kartaan taleefanka kuqoran ogaysiiska. Kasoo qaybgal wanaagsan meelkastood joogtaanba.
Halkan ka akhri : Ogaysiis shirka
Biblioteket på Rentemestervej 76
Su’aal hadaad qabtid la soo xidhiidh: +45 71516294